ကိုယျသငျးရနံ့လေး မှေးနစေမေယျ့ အစားအစာမြား
HomeKnowledgeကိုယျသငျးရနံ့လေး မှေးနစေမေယျ့ အစားအစာမြား
ခန်ဓာကိုယျကထှကျတဲ့ အနံ့တှကွေောငျ့ စိတျမသကျမသာ ဖွဈဖူးပါသလား?? ။ ခန်ဓာကိုယျက အနံ့ဆိုးထှကျရငျ အခကျကွုံရတတျပါတယျ။ ကိုယျသငျးနံ့ ဆိုတာ စားသောကျနတေဲ့ အစားအစာတှနေဲ့ ဆိုငျပါတယျ။
ရသေောကျခွငျးက ခန်ဓာကိုယျမှာ အနံ့အသကျ ဖွဈစတေဲ့ အဆိပျအတောကျတှကေို ဖယျရှားပေးပါတယျ။ ဘီယာသောကျတာကတော့ အပနျးဖွစေရာ ဖွဈပမေယျ့ ခန်ဓာကိုယျမှာ အနံ့အသကျဆိုးတှေ ဖွဈစပေါတယျ။
ဒိနျခဉျြက ခန်ဓာကိုယျမှာ အနံ့အသကျဆိုးထှကျခွငျးကို လြော့နညျးစပေါတယျ။ ဒိနျခဉျြမှာပါဝငျတဲ့ ဗီတာမငျ D က ပါးစပျထဲက ဘတျတီးရီးယားတှကေို တိုကျခိုကျပေးပွီး ခံတှငျးနံ့ ကောငျးစပေါတယျ။ နှားနို့မှာပါဝငျတဲ့ အာဟာရဓာတျက မနှဈမွို့ဖှယျအနံ့အသကျကို ဖွဈစပေါတယျ။
၃။ သံပရိုသီးနှငျ့ ဝိုငျ
ဝိုငျကို ညနခေငျးအခြိနျမှာ သောကျတာကကောငျးပမေယျ့ အလှနျအကြှံသောကျရငျ ခန်ဓာကိုယျမှာ ခဉျြစူးစူးအနံ့ကို ရမှာပါ။ အဲဒါကွောငျ့ သံပရိုသီးကို ရနေဲ့ဖြျောသောကျခွငျးက ခန်ဓာကိုယျက အဆိပျအတောကျတှကေို ဖယျရှားပေးပါတယျ။
လကျဖကျရညျစိမျးမှာ အငျတီအောကျဆီးဒငျ့တှေ မြားစှာ ပါဝငျပါတယျ။ ခန်ဓာကိုယျထဲမှာ အဆိပျအတောကျနညျးလေ အနံ့အသကျဆိုးကငျးလဖွေဈပါတယျ။ ကျောဖီ သို့မဟုတျ ကဖိနျးဓာတျ ပါဝငျတဲ့ အဖြျောယမကာတှကေ ကိုယျနံ့ပွငျးစပေါတယျ။
၅။ ပနျးသီးနှငျ့ ပနျးမုံလာ
ပနျးသီးက ခန်ဓာကိုယျမှာ အနံ့အသကျဆိုး မဖွဈအောငျ ကာကှယျပေးပါတယျ။ ပနျးမုံလာမှာ ပါဝငျတဲ့ ဗီတာမငျ B အာဟာရဓာတျက အနံ့အသကျဆိုးကို ဖွဈစပေါတယျ။
၆။ လိမ်မျောသီးနှငျ့ ဖရုံသီး
ဆီထရဈအကျဆဈ ပါဝငျတဲ့အသီးတှကေ ရနံ့မှေးပွီး ခန်ဓာကိုယျက အနံ့အသကျဆိုးတှကေို ဆုပျယူပေးပါတယျ။ ဖရုံသီးက ခန်ဓာကိုယျမှာ အာဟာရတော့ဖွဈပမေယျ့ မနှဈမွို့ဖှယျ အနံ့ကို ထုတျပေးပါတယျ။
၇။ ဖာလာစေ့၊ သဈကွံပိုးခေါကျနှငျ့ ကွကျသှနျဖွူ၊ ကွကျသှနျနီ
ဖာလာစေ့၊ သဈကွံပိုးခေါကျက အစားအစာတှကေို အရသာရှိစရေုံ မက သငျ့ခန်ဓာကိုယျကိုလညျး လနျးဆနျးလတျဆတျတဲ့ ရနံ့လေးတှကေိုလညျး ပေးပါတယျ။ ကွကျသှနျဖွူ ၊ ကွကျသှနျနီမှာ အျောဂငျးနဈဆာလဖာဒွပျစငျ ပါဝငျတာကွောငျ့ ခန်ဓာကိုယျရဲ့ မှေးညှငျးပေါကျလေးတှကေနေ အနံ့ဆိုး ဖွဈစပေါတယျ။
၈။ ကညှတျနှငျ့ တရုတျနံနံ
ကညှတျက တဈဖကျသားကို ဆှဲဆောငျနိုငျတဲ့ အနံ့မြိူး ထုတျလှတျပေးပါတယျ။ တရုတျနံနံမှာ ပါဝငျတဲ့ အကျဆဈက ဆာလဖာအဖွဈ ပွိုကှဲသှားပွီး ခန်ဓာကိုယျမှာ မနှဈသကျဖှယျ အနံ့အသကျဆိုးကိုပေးပါတယျ။
အသားမစားတဲ့သူရဲ့ ကိုယျရနံ့က အသားစားသူရဲ့ ကိုယျရနံ့ထကျပိုပွီး နှဈလိုဖှယျကောငျးပါတယျ။ ငါးစားတဲ့အခါလညျး အနံ့ဆိုးတှေ မဖွဈစပေါဘူး။ အဲဒါကွောငျ့ တဈယောကျယောကျနဲ့တှဖေို့ ရှိတယျဆိုရငျ ငါးစားခွငျးက ပိုကောငျးပါတယျ။
၁၀။ ပဲနံ့သာစနှေ့ငျ့ ဖရုံစေ့
ပဲနံ့သာစကေ့ အစာခစြေနဈကို ကူညီပေးပွီး ခန်ဓာကိုယျက အဆိပျအတောကျကွောငျ့ ဖွဈလာတဲ့အနံ့အသကျတှကေိုလညျး ဖယျရှားပေးပါတယျ။ ဖရုံစမှေ့ာ အာဟာရဓာတျ မွငျ့မားစှာ ပါဝငျပွီး အနံ့ဆိုးတှဖွေဈစပေါတယျ။
ခန်ဓာကိုယျမှာ အနံ့အသကျဆိုးစလေို့ ရှောငျနိုငျတဲ့အစားအစာတှကေ အာဟာရဓာတျတှေ မွငျ့မားနပွေနျပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ လုံးဝမစားလို့လဲ မရပါဘူးနျော။ အစိမျးရောငျရှိတဲ့ အသီးအနှံတှေ၊ အဆီထုတျထားတဲ့ နို့ထှကျပစ်စညျးတှကေို စားသငျ့ပါတယျ။ မြှမြှတတ စားပေးနိုငျရငျတော့ အကောငျးဆုံးပါပဲ။
ကိုယ်သင်းရနံ့လေး မွှေးနေစေမယ့် အစားအစာများ
ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တဲ့ အနံ့တွေကြောင့် စိတ်မသက်မသာဖြစ်ဖူးပါသလား?? ။ ခန္ဓာကိုယ်က အနံ့ဆိုးထွက်ရင် အခက်ကြုံရတတ်ပါတယ်။ ကိုယ်သင်းနံ့ ဆိုတာ စားသောက်နေတဲ့ အစားအစာတွေနဲ့ ဆိုင်ပါတယ်။
ရေသောက်ခြင်းက ခန္ဓာကိုယ်မှာ အနံ့အသက် ဖြစ်စေတဲ့ အဆိပ်အတောက်တွေကို ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။ ဘီယာသောက်တာကတော့ အပန်းဖြေစရာ ဖြစ်ပေမယ့် ခန္ဓာကိုယ်မှာ အနံ့အသက်ဆိုးတွေ ဖြစ်စေပါတယ်။
ဒိန်ချဉ်က ခန္ဓာကိုယ်မှာ အနံ့အသက်ဆိုးထွက်ခြင်းကို လျော့နည်းစေပါတယ်။ ဒိန်ချဉ်မှာပါဝင်တဲ့ ဗီတာမင် D က ပါးစပ်ထဲက ဘတ်တီးရီးယားတွေကို တိုက်ခိုက်ပေးပြီး ခံတွင်းနံ့ ကောင်းစေပါတယ်။ နွားနို့မှာပါဝင်တဲ့ အာဟာရဓာတ်က မနှစ်မြို့ဖွယ်အနံ့အသက်ကို ဖြစ်စေပါတယ်။
၃။ သံပရိုသီးနှင့် ဝိုင်
ဝိုင်ကို ညနေခင်းအချိန်မှာ သောက်တာကကောင်းပေမယ့် အလွန်အကျွံသောက်ရင် ခန္ဓာကိုယ်မှာ ချဉ်စူးစူးအနံ့ကို ရမှာပါ။ အဲဒါကြောင့် သံပရိုသီးကို ရေနဲ့ဖျော်သောက်ခြင်းက ခန္ဓာကိုယ်က အဆိပ်အတောက်တွေကို ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။
လက်ဖက်ရည်စိမ်းမှာ အင်တီအောက်ဆီးဒင့်တွေ များစွာ ပါဝင်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ အဆိပ်အတောက်နည်းလေ အနံ့အသက်ဆိုးကင်းလေဖြစ်ပါတယ်။ ကော်ဖီ သို့မဟုတ် ကဖိန်းဓာတ် ပါဝင်တဲ့ အဖျော်ယမကာတွေက ကိုယ်နံ့ပြင်းစေပါတယ်။
၅။ ပန်းသီးနှင့် ပန်းမုံလာ
ပန်းသီးက ခန္ဓာကိုယ်မှာ အနံ့အသက်ဆိုး မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ပန်းမုံလာမှာ ပါဝင်တဲ့ ဗီတာမင် B အာဟာရဓာတ်က အနံ့အသက်ဆိုးကို ဖြစ်စေပါတယ်။
၆။ လိမ္မော်သီးနှင့် ဖရုံသီး
ဆီထရစ်အက်ဆစ် ပါဝင်တဲ့အသီးတွေက ရနံ့မွှေးပြီး ခန္ဓာကိုယ်က အနံ့အသက်ဆိုးတွေကို ဆုပ်ယူပေးပါတယ်။ ဖရုံသီးက ခန္ဓာကိုယ်မှာ အာဟာရတော့ဖြစ်ပေမယ့် မနှစ်မြို့ဖွယ် အနံ့ကို ထုတ်ပေးပါတယ်။
၇။ ဖာလာစေ့၊ သစ်ကြံပိုးခေါက်နှင့် ကြက်သွန်ဖြူ၊ ကြက်သွန်နီ
ဖာလာစေ့၊ သစ်ကြံပိုးခေါက်က အစားအစာတွေကို အရသာရှိစေရုံ မက သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်း လန်းဆန်းလတ်ဆတ်တဲ့ ရနံ့လေးတွေကိုလည်း ပေးပါတယ်။ ကြက်သွန်ဖြူ ၊ ကြက်သွန်နီမှာ အော်ဂင်းနစ်ဆာလဖာဒြပ်စင် ပါဝင်တာကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ မွှေးညှင်းပေါက်လေးတွေကနေ အနံ့ဆိုး ဖြစ်စေပါတယ်။
၈။ ကညွတ်နှင့် တရုတ်နံနံ
ကညွတ်က တစ်ဖက်သားကို ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ အနံ့မျိူး ထုတ်လွှတ်ပေးပါတယ်။ တရုတ်နံနံမှာ ပါဝင်တဲ့ အက်ဆစ်က ဆာလဖာအဖြစ် ပြိုကွဲသွားပြီး ခန္ဓာကိုယ်မှာ မနှစ်သက်ဖွယ် အနံ့အသက်ဆိုးကိုပေးပါတယ်။
အသားမစားတဲ့သူရဲ့ ကိုယ်ရနံ့က အသားစားသူရဲ့ ကိုယ်ရနံ့ထက်ပိုပြီး နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းပါတယ်။ ငါးစားတဲ့အခါလည်း အနံ့ဆိုးတွေ မဖြစ်စေပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် တစ်ယောက်ယောက်နဲ့တွေ့ဖို့ ရှိတယ်ဆိုရင် ငါးစားခြင်းက ပိုကောင်းပါတယ်။
၁၀။ ပဲနံ့သာစေ့နှင့် ဖရုံစေ့
ပဲနံ့သာစေ့က အစာချေစနစ်ကို ကူညီပေးပြီး ခန္ဓာကိုယ်က အဆိပ်အတောက်ကြောင့် ဖြစ်လာတဲ့အနံ့အသက်တွေကိုလည်း ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။ ဖရုံစေ့မှာ အာဟာရဓာတ် မြင့်မားစွာ ပါဝင်ပြီး အနံ့ဆိုးတွေဖြစ်စေပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်မှာ အနံ့အသက်ဆိုးစေလို့ ရှောင်နိုင်တဲ့အစားအစာတွေက အာဟာရဓာတ်တွေ မြင့်မားနေပြန်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် လုံးဝမစားလို့လဲ မရပါဘူးနော်။ အစိမ်းရောင်ရှိတဲ့ အသီးအနှံတွေ၊ အဆီထုတ်ထားတဲ့ နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေကို စားသင့်ပါတယ်။ မျှမျှတတ စားပေးနိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ။